Estera 8: 1-17
Estera 7 Estera 8 Estera 9
Tamin'izany andro izany dia nomen'i Ahasoerosy mpanjaka ho an'i Estera, vadin'ny mpanjaka, ny tranon'i Hamana, fahavalon'ny Jiosy. Ary Mordekay nankeo anatrehan'ny mpanjaka, fa efa voalazan'i Estera fa rainy izy.
Ary nanao hoe: Raha sitraky ny mpanjaka, Ary mahita fitia eto imasony aho, sady ataon'ny mpanjaka ho mety izany, ka mahita sitraka eto imasony aho, dia aoka hisy soratra hanova ireny taratasy voahevitr'i Hamana, zanak'i Hamedota Agagita, ireny, izay nosoratany hampandringana ny Jiosy amin'ny isan-tokony eran'ny fanjakan'ny mpanjaka;
fa hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko ? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako ?
Dia hoy Ahasoerosy mpanjaka tamin'i Estera, vadin'ny mpanjaka, sy tamin'i Mordekay Jiosy: Indro, ny tranon'i Hamana efa nomeko an'i Estera, Ary izy dia efa nahantona tamin'ny hazo, satria naninjitra ny tànany hamely ny Jiosy;
Ary hianareo kosa dia manorata amin'ny anaran'ny mpanjaka araka izay sitrakareo hamonjy ny Jiosy, ka tombohy amin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka izany; fa tsy misy mahavadika ny soratra izay efa voasoratra tamin'ny anaran'ny mpanjaka sy efa voatomboka tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka.
Dia nantsoina tamin'izay ny mpanoratry ny mpanjaka, tamin'ny andro fahatelo amby roa-polo tamin'ny volana fahatelo (volana Sivana izany); Ary nosoratana araka izay rehetra nandidian'i Mordekay izany ho any amin'ny Jiosy sy ny solo-mpanjaka sy governora Ary ny mpanapaka amin'ny isan-tokony hatrany India ka hatrany Etiopia, dia fito amby roa-polo amby zato toko, ny isan-tokony araka ny sorany avy, Ary ny isam-pireneny araka ny fiteniny avy, Ary ny Jiosy araka ny sorany sy araka ny fiteniny.
Ary nanoratra taratasy tamin'ny anaran'i Ahasoerosy manjaka izy ka notombohiny tamin'ny peratra fanombohan'ny mpanjaka, Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny tsimandoa mitaingin-toavaly sy soavaly haingam-pandeha Ary ampondra, zanaky ny soavalivavy;
Dia lasa ny tsimandoa izay nitaingina soavaly haingam-pandeha sy ampondra, ka hohafainganina sy nododonan'ny tenin'ny mpanjaka izy. Ary nantsoina tany Sosana renivohitra koa ny lalàna.
Ary tamin'ny nialan'i Mordekay teo anatrehan'ny mpanjaka dia niakanjo akanjo fiandrianana manga sy fotsy izy sady nisatroka satroboninahitra volamena lehibe sy niakanjo akanjo lava rongony fotsy madinika sy volomparasy; Ary faly sy ravo ny tanàna Sosana.